Geesiga Xulka England Ee Kalvin Phillips Oo Madaxa Ka Dhaawacmay, Dhakhaatiirta Oo La Tacaalaysa & Sida Wax U Dhaceen - Laacib
HomeWararka CiyaarahaGeesiga Xulka England Ee Kalvin Phillips Oo Madaxa Ka Dhaawacmay, Dhakhaatiirta Oo La Tacaalaysa & Sida Wax U Dhaceen
Geesiga Xulka England Ee Kalvin Phillips Oo Madaxa Ka Dhaawacmay, Dhakhaatiirta Oo La Tacaalaysa & Sida Wax U Dhaceen
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara xulka England iyo kooxda Leeds United ayaa madaxa dhaawac kasoo gaadhay kaddib shil uu ku galay hotel lagu caweeyo oo ay kooxdiisu ku samaynaysay dabbaal-deg ay kusoo dhoweynaysay Ciidda Masiixiga.
Leeds United oo Axaddii guul-darro 2-1 ah kala kulantay Tottenham ayaa waxay ciyaartoydeeda u fasaxday inay tagaan xaflad lagu qabanayay goobta caanka ah ee Cirque Le Soir oo ay kusoo caweeyeen.
Sida uu qoray wargeyska The Telegraph, Kalvin Phillips ayaa shil ku galay caweyskaas, waxaana uu dhaawac ka gaadhay madaxa, kaas oo keenay inay qaybo jidkiisa ka mid ahi go’aan.
Dhakhaatiirta Leeds United ayaa gacanta ku haysa xaaladda laacibkan, waxaanay qiimayn doonaan xaaladdiisa ka hor inta aan loo ogolaanin inuu qayb ka noqdo tababarka kooxdiisu ay iskugu diyaarinayso ciyaarta Sabtida ee Brighton.
Warka ayaa intaa ku daray in Phillips ay xaaladdiisu fiican tahay oo aanu khatar badan gelin, isla markaana uu ciyaari doono kulanka Sabtida oo ay u baahan yihiin inay guul ka keenaan si ay sare ugu soo kacaan maadaama ay hadda fadhiyaan kaalinta 17aad oo ay kaliya laba dhibcood ka sarreeyaan khadka cas ee dib loogu noqdo heerka labaad.
Tababare Marcelo Bielsa ayaa la sheegay inuu bixiyey fasaxa ciyaartoydiisu ay ku tageen xafladdan habeennimo si ay dibedda iskugu soo illowsiiyaan guul-darradii Tottenham iyo xilli-ciyaareedka xun ee ay ku jiraan.
Kalvin Phillips ayaa ka mid ahaa xiddigihii xulka qaranka England ee wacdaraha ka dhigay tartankii Euro 2020 ee finalka ay yimaaddeen, iyadoo uu laacibkani si joogto ah ugu soo bilaabanayay, waxaanu gaadhay heer ay taageereyaasha xulka England u codeeyaan inuu yahay xiddigoodii ugu fiicnaa sannadkan 2021.